Umgaqo-nkqubo wabucala-iZiko lezeLwimi eziBini
Ikhaya Iipolisiumthetho wabucala
Idilesi yethu yewebhu yile: http://bei.edu.
Xa iindwendwe zishiya izimvo kwisayithi esiqokelela idatha eboniswe kwifom yeenkcazo, kunye nedilesi ye-IP yeendwendwe kunye nomtya we-arhente yomsebenzisi wesiphequluli ukunceda ukufumanisa ugaxekile.
Umtya ongenamagama owenziwe kwidilesi yakho ye-imeyile (ebizwa ngokuba yi-hash) inokunikezelwa kwinkonzo yeGravatar ukubona ukuba uyayisebenzisa. Umgaqo-nkqubo wabucala we-Gravatar ukhona apha: https://automattic.com/privacy/. Emva kokuvunywa kwamagqabaza akho, umfanekiso wakho wefayile ubonakala kuluntu kumxholo wakho.
Ngubani esabelana nawe nedatha yakho
Ukuba unayo i-akhawunti kule ndawo, okanye ushiye amazwana, unokucela ukufumana ifayile ekhuphayo yeenkcukacha zobuntu esinazo malunga nawe, kubandakanye nayiphi na idatha oyinike yona. Unokucela ukuba siphume nayiphi na idatha esicacileyo malunga nawe. Oku akubandakanyi nayiphi na idatha esimele siyibophezele ukugcina iinjongo zokuphatha, zomthetho, okanye zokhuseleko.
© Ilungelo lokushicilela 2020 iZiko leMfundo leelwimi ezimbini